विभाजित एमालेमा को कता (नामावलीसहित) - Sidha News
विभाजित एमालेमा को कता (नामावलीसहित)
नेपाल खनाल समूहमा एमालेमा लामो राजनीतिक गरेका हस्तीहरु हुनेछन् । जसमा भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, मुकुन्द न्यौपाने, डा. विजय पौडेललगायत हुने बुझिएको छ । सम्भवत वामदेव गौतम पनि अध्यक्ष या सहअध्यक्ष बनेर नेकपा एकीकृतमा रहनेछन् । गौतम ओलीसँग सन्तुष्ट छैनन् ।
गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराईलाई पनि नयाँ दलमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने गरी तान्ने प्रयास भइरहेको बुझिएको छ । बिष्ट ओली समूहमा नबस्ने सम्भावना बलियो छ । तर, भट्टराई भने अलमलमा छन् । उनले पछिल्लो समय नेपाललाई साथ दिन मानेनन् । बिष्टले पनि साथ दिएनन् तर नियमित सम्पर्कमा रहेको बताइरहेका छन् ।
गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई पनि नवौं महाधिवेशनका निर्वाचित पदाधिकारी हुन् । उनीहरु मध्यमार्गी धारमा छन् । विभाजित एमालेमा नवौं महाधिवेशनका पदाधिकारी दुवैतर्फ आधा आधा जस्तो रहने देखिएको छ । केही पूर्व पदाधिकारीले कुन पक्षमा लाग्ने टुंगो लगाइसकेका छैनन् । जसमध्ये गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई मुख्य छन् ।
एमालेको विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुमध्ये नेपाल समूहमा ३० को हाराहारीमा रहने देखिएको छ । २३ जना खुलेरै नेपाल समूहमा लागेका छन् । बाँकी ओली समूहमा रहने सम्भावना छ । नवौं महाधिवेशनको निर्वाचित पदाधिकारीमध्ये ५ जना पदाधिकारी ओली पक्षमा छन् ।
गोकर्ण बिष्ट र योगेश भट्टराई कता लाग्ने हुन् प्रतिक्षाको विषय छ । यथास्थितिमा ५ जना पदाधिकारी माधव नेपाल पक्षधर छन् । उपाध्यक्ष निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भइसकेकाले उक्त पद खाली भएको थियो । निर्वाचित उपाध्यक्ष बामदेव गौतम अहिलेसम्म तटस्थ छन् ।
९. विष्णु रिमाल
(एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित र मनोनित पदाधिकारी)